Ukunta Cagaarka Cagaaran ee Ukunta
Macmacaanka Kukiyada Cuntada Yurub Kukiyada Caalamiga ah Jarmal Jarmal
Kuwani waa farxad dheeraad ah oo ku saabsan munaasabadda fasaxa Easter-kaaga ama gu'gaaga. Waxaan isticmaalay saldhig bilaash ah oo basbeel ah, laakiin waxaad si fudud u geyn kartaa adigoo ku daraya dhirta aad jeceshahay ama beddelayso cunto kariska shukulaatada ee roodhida ah ee loogu talagalay dhadhan dhan. Fikradda kale waa in lagu daro soo gelida citrus dhirta cusub.
Waxaad u baahan doontaa labo cutters oo kala duwan si aad u abuurto qaabka ukunta ee kuyaalkan. Mid waa qayb ka mid ah ukunta qaabaynta ukunta, kan kalena waa cutub yar oo wareegsan.
Si aad u abuurto midabka "sokor", waxaad isticmaashaa khudaar, jilicsan, midab ama liin leh. Marmalade kasta oo jilicsan oo jilicsan, jelly ama macaanka ayaa si fiican u shaqeeya.
3 koob oo bur ah (dhammaan ujeedada)
1/2 koob oo bur ah (dhammaan ujeedada)
1 qaado oo milix ah
2 sticks / 1 koob oo ah subag (aan lahayn)
2/3 koob sonkor ah (granulated cad)
laga soo saaro bakoorka (daahir)
1 koob oo sonkor ah (budo)
1/3 koob oo biyo ah (ama inta loo baahdo ee ku habboonaanta saxda ah)
In baaquli gaar ah, oo wada jir ah bur bur ah oo dhan iyo cusbo. Qaado.
Ku dhaji sonkorta shimbiraha aan la karinin iyo caddaanka ah si wada jir ah xawaaraha dhexdhexaad ah ilaa kareemka. Ku dar ukunka iyo walaxda la nadiifiyo ee nadiifka ah ilaa la isku daro
Si tartiib tartiib tartiib tartiib ah hoos ugu dhufo oo tartiib tartiib ah ku dar dhammaan burcadda ujeedada, isku dar milix ilaa inta la isku daro.
Ka samee cajiinka kubadda, ku duub foorno caag ah iyo meel qaboojiyaha ilaa 60 daqiiqo.
Foorno ilaa 400 F. Khadka 2aad dubista xaashida warqadda xayawaanka.
Demi cajiinka si aad u dusha sare uga shaqeyso oo u soo bax. Isticmaal cutubka cookie-ka ee ukunta si aad u gooysiiso ukunta cagaarka ah ee adag. Ku rid kuwaas mid ka mid ah xaashida dubista.
Iska jar qayb kale oo ukun ah oo ukun ah, ka dibna isticmaal cutub yar oo wareegsan si loo abuuro dalool meel dhexe. Ku rid buugashadan jarjaran ee ku saabsan xaashida kale ee dubista. Kukiyada adag iyo kereemooyinka la gooyo waxay yeelan doonaan waqti badan oo la dubayo. Sidaa darteed, waa in si gooni ah loo dubo.
Geli bokisyada foornada foornada iyo dubi 8 daqiiqo kariimka la gooyo iyo 10 daqiiqo kariimka adag. Ka hubi 5 daqiiqo ka dib. Ka saar foornada kahor intaan cidhifyada lahayn.
Ka saar cookies ka foornada. Ku wareeji qaboojinta qaboojinta, kala-soocida adag iyo keegyada la gooyey ee laba farood oo kala duwan. Isku qabso si buuxda. Kaydso warqadaha dubista ee warqadda soo dejinta. Waxaad u baahan doontaa waqti dambe.
Marka kalluunku si buuxda u qaboojiyo. Isku duwo sonkorta budada leh biyo, ku dar hal qaado oo marmar ah illaa inta ay joogtadu tahay mid ku filan inuu ku shubo. Haddii ay isku dhafka noqoto mid aad u khafiif ah, ku dar sonkor badan oo budo ah, hal qaado oo qiyaas ah illaa iyo inta ay joogtadu tahay mid sax ah.
Saar qaboojinta qaboojinta leh go'yada ka baxsan xaashida dubista warqadda soo dejinta. Kala saar cookies cutout galay glaze sonkorta iyo si tartiib ah ku dheji dhinaca dhinaca baaquli si loogu yareeyo khudradda xad-dhaaf ah.
Ku dheji kariska cookie-ka ee laf-dhabarka dib-u-qaboojinta. Ku celi illaa iyo inta la gooyey oo dhan la kariyey. Cirridku si buuxda u qalaji ka hor inta aadan taaban.
Riix caarada midabada midabeysan adigoo isticmaalaya qalajiye. U caday kariimyada ukunta-qaabaysan oo adag oo la isku qurxiyo oo leh lakabka qarada ee macaanka. Ku dar kumbiyuutarka leh cookie la yareeyey oo dibna dib ugu rid rack qaboojinta.
Marka dhamaan cookies loo duudduubay, ha u fariistaan ​​ugu yaraan hal saac si aad u qalajiso gebi ahaan ka hor intaadan jeexin iyo adeeg.
Fatuurad la ruxay 8 g
Kolestarool 87 mg
Carbohydrateska 29 g
Oktoberfest Daaweynta guriga
Shukulaatada Vegan ee Shukulaatada oo labajibaaran
Tarjumada Vegan Strawberry Sorbet
Khariidad Khudaar Cagaaran Khudaarta
Khudradda Dufanka ah ee Reuben Casserole leh Lakabyo Sigaar ah
Dafne Martini Recipe: A Delicious Blue leh Pear Vodka iyo Gin
Xisbiyada Layered Party Sandwiches leh roodhida Spin
Faransiiska Canadian-Style Crock Pot Crunch Soup Pea
Suprême Suugo Qoraal ah
Sida loo Faafiyo
Samee Harvey Wallbanger Cake for a '70s Dib u celin
Fasalka Moroccan Chermoula Marinade Recipe
Qalabka Roobka ah
Sidee dharka u lebistay Apple Pie
Dib u noqoshada dubi (Drum Red)